Mozartkugeln, bọọlụ chọkọletị nke Salzburg | Akụkọ Njem
Mozartkugeln, bọọlụ chocolate Salzburg
Wolfgang Amadeus Mozart Ọ bụ akụkọ ihe mere eme agwa na ukwuu amamihe karịa obodo Salzburg nyere ụwa. Ọ bụ ya mere na obodo Austrian na-echeta ya na otu puku ụzọ dị iche iche: site na ihe ncheta, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ememme egwu ... Na kwa ụtọ chocolate kpuchie marzipan bọọlụ anyị na-ahụ na ụlọ ahịa niile: mozartkugeln, ma ọ bụ "Mozart bọọlụ"
Ihe ịtụnanya sitere na kichin achịcha achịcha achịcha Paul Furst na 1890, otu narị afọ mgbe onye egwu ahụ nwụsịrị. N'ezie, ihe ịchọ mma Fürst na-aga n'ihu na-eme nri a n'ụzọ ọrụ aka na dịka usoro mbụ si dị: pistachio marzipan sara na akwa nougat. Ọnwụnwa na-enweghị ike igbochi ya. Ọ dịghị onye gafere Salzburg na-anwaleghị ya, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ịchọta Mozartkugeln ebe ọ bụla na Austria.
Kwa afọ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde abụọ Mozartkugeln nke ụdị dị iche iche na-emepụta na Austria: Scahtz, Holzermayr, Mirabell, Viktor Schmidt, Hofbauer, Heindl, ReberMa n'ezie ndị ochie nke ụlọ Fürst. Ọtụtụ n'ime ihe ịga nke ọma ya sitere n'echiche nke itinye eserese anwụghị anwụ nke Mozart na ngwugwu chọkọletị.
Na mgbakwunye, nke a bụ ụdị igbe onyinye dị iche iche anyị nwere ike ịchọta n'ụlọ ahịa chọkọletị na ebe nchekwa nke Salzburg na ọ gaghị ekwe omume ịla n'ụlọ na-enweghị ịzụta otu. E nwere ihe dị mfe na oge gboo kamakwa nnukwu ma saa mbara, ụfọdụ n’ime ha dị n’ụdị ngwa egwu dịka violins, pianos na clarinets. Ha na-abanye n'ime anyị site na anya wee merie anyị n'okwu ọnụ. Ga-anwale ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Austria » Mozartkugeln, bọọlụ chocolate Salzburg
Ndewo, achọrọ m chọkọletị ndị a nke ukwuu, m wee zụta ha na ụlọ ahịa Liverpool, ọ dị nwute na enweghịzi m ike ịchọta ha ebe ọ bụla, m ga-achọ ịma ma enwere Mexico na ebe a na-ere ya. M ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ịnye m ozi ọ bụla.
Zaghachi Cristina Saharrea
Shopslọ ahịa chocolate kacha mma na New York
Top 3 nke kacha mma European Christmas ahịa